Xbox One ဝယ်မိခဲ့ရင်. – REDPlayer
Xbox One ဝယ်မိခဲ့ရင်.
Christmas ကာလလည်းဖြစ်တယ်၊ သိပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်းလေးမှာပဲ နှစ်သစ်ရောက်တော့မှာဆိုတော့ လက်ဆောင်တွေလည်းရထားပြီးရောပေါ့။ ရတဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာ Xbox One များပါလာခဲ့ရင် ဒီဂိမ်းတွေကိုဆော့ဖြစ်အောင်ဆော့ကြည့်ပေါ့။ some of the best in 2017 ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Xbox One player တွေအတွက်ပါ။
2017 တစ်ခုလုံးကို အလွှမ်းမိုးဆုံး ဂိမ်းတစ်ခုက Xbox One အတွက်လည်း ထွက်ရှိထားပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် လေထီးနဲ့ အသာလေးခုန်ဆင်းပြီး ဒယ်ပြားတစ်ခု လက်နက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ဒီဂိမ်းထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့ အနေအထိုင်တတ်ရင် last man standing ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လွတ်လပ်ရေးရယ်၊ နာဇီတွေရယ်၊ ခွေးစက်ရုပ်၊ သွေး၊ သေနတ်တွေ နောက်ခံတီးလုံးကောင်းကောင်းနဲ့ cutscene ကောင်းကောင်းတွေ၊ ဒါဆိုလုံလောက်ကောင်းပါရဲ့။
Assassin’s Creed : Origins
ကြုံနေကြအတိုင်း Assassin’s Creed Game တိုင်းရဲ့ Same Old story ပုံစံမျိုးဆိုပေမယ့်၊ မကြုံရသေးတဲ့ အီဂျစ်ဒေသရယ်၊ မြေပုံအကြီးကြီး တစ်ခုရယ် ၊ အဲ့မြေပုံတွေမှာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီး ထည့်ထားပေးတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အတိတ်မေ့ရောဂါရှိနေတဲ့ character နေရာကနေ alien တွေနဲ့ ဗျင်းရမယ်ဆိုလို့ အရင် alien shooter game လို့ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ Player တစ်ဦးချင်းရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ battle တွေကိုစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ မဲမဲမြင်ရာ ပစ်မလား၊ အေးဆေး ရှောင်သွားမလားပေါ့။ Alien တွေကိစ္စကို သိပ် အထွန့်မတက်ထားတာကောင်းတယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
Bungie ကြီးဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ လက်ရှိ ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ FPS တွေထဲ အကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ Latest Trailer တော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါအကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီဂိမ်းဟောင်းတွေကိုလည်း ကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ Cuphead, Gears of war 4, superhot, rocketleague, overwatch, titanfall 2, dishonored 2, doom, rise of the tombraider, Ori and the blind forest, Deus Ex: Mankind divided,.
Cuphead ကတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ စိတ်တိုရလွန်းလို့ သတိတော့ပေးလိုက်ပါရဲ့။ မဟုတ်ရင် လက်ဆောင်ရတဲ့ အသစ်စက်စက် Xbox ကိုပေါက်ခွဲမှာစိုးလို့။
Christmas ကာလလညျးဖွဈတယျ၊ သိပျမကွာခငျရကျပိုငျးလေးမှာပဲ နှဈသဈရောကျတော့မှာဆိုတော့ လကျဆောငျတှလေညျးရထားပွီးရောပေါ့။ ရတဲ့လကျဆောငျတှထေဲမှာ Xbox One မြားပါလာခဲ့ရငျ ဒီဂိမျးတှကေိုဆော့ဖွဈအောငျဆော့ကွညျ့ပေါ့။ some of the best in 2017 ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ Xbox One player တှအေတှကျပါ။
2017 တဈခုလုံးကို အလှမျးမိုးဆုံး ဂိမျးတဈခုက Xbox One အတှကျလညျး ထှကျရှိထားပါတယျ။ လိုအပျခကျြတှရှေိနသေေးတယျဆိုပမေယျ့ လထေီးနဲ့ အသာလေးခုနျဆငျးပွီး ဒယျပွားတဈခု လကျနကျလုပျကိုငျနရေတဲ့ ဒီဂိမျးထဲမှာ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ စမျးကွညျ့ပေါ့ အနအေထိုငျတတျရငျ last man standing ဖွဈနိုငျပါလိမျ့မယျ။
လှတျလပျရေးရယျ၊ နာဇီတှရေယျ၊ ခှေးစကျရုပျ၊ သှေး၊ သနေတျတှေ နောကျခံတီးလုံးကောငျးကောငျးနဲ့ cutscene ကောငျးကောငျးတှေ၊ ဒါဆိုလုံလောကျကောငျးပါရဲ့။
ကွုံနကွေအတိုငျး Assassin’s Creed Game တိုငျးရဲ့ Same Old story ပုံစံမြိုးဆိုပမေယျ့၊ မကွုံရသေးတဲ့ အီဂဈြဒသေရယျ၊ မွပေုံအကွီးကွီး တဈခုရယျ ၊ အဲ့မွပေုံတှမှော ပွညျ့နှကျနတေဲ့ စိတျဝငျစားစရာတှအေမြားကွီး ထညျ့ထားပေးတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
အတိတျမရေ့ောဂါရှိနတေဲ့ character နရောကနေ alien တှနေဲ့ ဗငျြးရမယျဆိုလို့ အရငျ alien shooter game လို့ထငျရငျမှားသှားပါလိမျ့မယျ။ Player တဈဦးခငျြးရဲ့ စိတျတိုငျးကြ battle တှကေိုစီစဉျနိုငျပါတယျ။ မဲမဲမွငျရာ ပဈမလား၊ အေးဆေး ရှောငျသှားမလားပေါ့။ Alien တှကေိစ်စကို သိပျ အထှနျ့မတကျထားတာကောငျးတယျပွောရမယျထငျပါတယျ။
Bungie ကွီးဘာတှပေဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ လကျရှိ ဈေးကှကျထဲမှာတော့ FPS တှထေဲ အကောငျးဆုံးတဈခုလို့ မွငျပါတယျ။ Latest Trailer တော့ထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။
ဒါအကုနျမဟုတျသေးပါဘူး။ ဒီဂိမျးဟောငျးတှကေိုလညျး ကွိုကျကွပါလိမျ့မယျ။ Cuphead, Gears of war 4, superhot, rocketleague, overwatch, titanfall 2, dishonored 2, doom, rise of the tombraider, Ori and the blind forest, Deus Ex: Mankind divided,.
Cuphead ကတော့ ဒီနှဈရဲ့ ဂိမျးတဈခုပါ။ စိတျတိုရလှနျးလို့ သတိတော့ပေးလိုကျပါရဲ့။ မဟုတျရငျ လကျဆောငျရတဲ့ အသဈစကျစကျ Xbox ကိုပေါကျခှဲမှာစိုးလို့။
Tags console PUBG videos xbox one
Best of 2017 from Valve